Dalet အာရှပစိဖိတ်မှ General Manager အဖြစ် Dalet ရက်ချိန်းထရီတတ် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Dalet အာရှပစိဖိတ်မှ General Manager အဖြစ် Dalet ရက်ချိန်းထရီတတ်
Dalet အာရှပစိဖိတ်မှ General Manager အဖြစ် Dalet ရက်ချိန်းထရီတတ်
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - စက်တင်ဘာလ 11, 2019 - Dalet, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့ Dalet အာရှပစိဖိတ်မှ General Manager (ပွေး) အဖြစ်ထရီတတ်၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။ စင်္ကာပူတွင်တည်ရှိသော Dalet ဒေသဆိုင်ရာဌာနချုပ်ထဲကအခြေခံပြီးတတ်သည့်ပွေးနယ်မြေကိုဖြတ်ပြီး Dalet အရောင်း, စီမံကိန်းနှင့်ဖောက်သည်အောင်မြင်မှုအသင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဝယ်ယူမှတဆင့် Dalet ပူးပေါင်းသူကိုတတ်, ယခင်က Ooyala အာရှပစိဖိတ်နှင့်ဂျပန် (APJ) အတွက်ရောင်းအား၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သည်။
"ထရီသည် broadcast, မီဒီယာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အတွေ့အကြုံနှင့်အောင်မြင်စွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အာရှပစိဖိတ်ကိုဖြတ်ပြီးစျေးကွက်သစ်သို့ချဲ့ထွင်တဲ့သက်သေပြချက်တွင် track record ၏ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနှင့်အတူ Dalet အဖွဲ့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ သူက ", အဖွဲ့မှကျွမ်းကျင်မှု, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်လတ်ဆတ်သောရှုထောင့်ဆောင်တတ်၏သူတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ထားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည် Stephan Schlayen, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ် Dalet, ဖော်ပြသည်။ "Dalet နှင့် Ooyala နှစ်ဦးစလုံးပေါင်းစည်းသည့်အခါ, ထိုအာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းဂုဏ်သတင်းကိုးကားရှိသည်, ထရီ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ပို. အလားအလာအလားအလာရှိသည်။ ကျနော်တို့သူ့ကိုသူ၏အသစ်ကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။ "
An IABM ပွေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်, တတ်ပြီးတော့ APJ ထဲမှာ, လက်တင်အမေရိကဒေသတွင်ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်မွေးစားမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများထားရှိစီမံခန့်ခွဲခြင်း, 2014 ကတည်းက Ooyala နှင့်အတူ key ကိုရာထူးကျင်းပလျက်ရှိသည်။ မိမိအနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူခေါင်းဆောင်မှုထုတ်လွှင့်, ကော်ပိုရိတ်အမှတ်တံဆိပ်, ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ, အဖွဲ့ချုပ်နှင့်အားကစားအဖွဲ့များသူတို့ရဲ့ content တွေကိုထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ခေတ်မီခြင်းနှင့်အချိန်-to-ပစ်လွှတ်ကိုယ်ပိုင် Multi-Platform ကိုတှေ့အကွုံမြားကိုလျော့ချကူညီပေးခဲ့တယ်။
တတ်လက်တင်အမေရိကများအတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှူးအဖြစ် Dalet မှာအသစ်တခုအခန်းကဏ္ဍသို့တိုးမြှင်ခဲ့သူ Cesar Camacho, အောင်မြင်။ Schlayen ကောက်ချက်ချ, "ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူပွေးဒေသဖြတ်ပြီး Dalet စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းထဲသို့သွင်းထားလိုက်ပါတယ်အပ်နှံမှုအတွက် Cesar ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ မိမိအပံ့ပိုးမှုများကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, တိုးတက်မှုနှင့်ဖောက်သည်အောင်မြင်မှုကားမောင်းအတွက်နျဆာပခဲ့သည်။ ငါသူလက်တင်အမေရိကဈေးကွက်မှကတိကဝတ်များနှင့်အောင်မြင်မှုများ၏တူညီသောအဆင့်ကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ယုံကြည်မှုဖြစ်၏။ "
တွေ့ဆုံထရီတတ်ခြင်းနှင့် Dalet @ IBC2019
IBC2019 တက်ရောက်မှာနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ထရီတတ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ရက်ချိန်းစာအုပ်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ် Dalet ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကသရုပ်ပြသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းအသွားအလာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရှိနိုင်ပါသည် www.dalet.com/events/ibc-show-2019.
စာနယ်ဇင်းမှာအဲလက်စ် Molina ဆက်သွယ်နိုင်သည် [အီးမေးလျ protected] မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲတွင်အချိန်စာရင်းရန်။
အတူတကွ သာ. ကောင်း၏ - IBC2019 @ တစ်ဦးအလွန်အထူး Dalet Pulse Event ကို Join!
ဤသည် IBC2019, အ Dalet Pulse မီဒီယာဆန်းသစ်တီထွင်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေး Ooyala ပါဝင်သည်ရန်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ခုအကြီးအမီဒီယာအဖွဲ့များနှင့်နည်းပညာများ, အ Dalet Pulse ဆောင်ပုဒ်ယခုနှစ်ပူးပေါင်းကျင်းပတာ, ပိုကောင်းအတူတကွ, တက်ရောက်လာသည့်တိုးချဲ့ထုတ်ကုန်အစုစုကိုဘယ်လိုဦးဆောင်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ Dalet ဖြေရှင်းချက်များနှင့်မိတ်ဖက်နည်းပညာများနှင့်အတူပရိသတ်တွေနှင့်တိုးဝင်ငွေ-ပလက်ဖောင်း Multi မှထူးခြားသောအကြောင်းအရာအတွေ့အကြုံများအပ်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အကြောင်းအရာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကူညီပေးသည်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။ ဒါဟာအစကျယ်ပြန့်အသင်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းပါပဲ။
ကြာသပတေးနေ့, 12 စက်တင်ဘာလ
ဘားစားသောက်ဆိုင် Pompstation, အမ်စတာဒမ်
ပါတီ: 19: 00 - 22: 00
Dalet ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအများပြည်သူထုတ်လွှင့် (ဘီဘီစီ, CBC, ပြင်သစ်တီဗီ, RAI, TV2 ဒိန်းမတ်, RFI, ရုရှားယနေ့ RT ကိုမလေးရှား, SBS ရဲ့သြစတြေးလျ, ဗွီအိုအေ) အပါအဝင်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးရာပေါင်းများစွာ, စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်များမှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသုံးပြုကြသည်နှင့် အော်ပရေတာ (တူးမြောင်း + FOX, MBC ဒူဘိုင်း, Mediacorp, Fox ကအားကစားသြစတြေးလျ, Turner အာရှ, Mediaset, လိမ္မော်ရောင်, ပဋိညာဉ်စာတမ်း Spectrum, Warner Bros, Sirius XM ရေဒီယို), အားကစားအဖွဲ့အစည်းများ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရပ်ဘီအသင်း, FIVB, LFP) နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (ဗြိတိန်ပါလီမန်က , နေတိုး, ကုလသမဂ္ဂ, စစ်ပြန်ရေးရာ, နာဆာ) ။
အနီရောင်ဧရာ မှစ. နယူးသင်ခန်းစာနဲ့အတူ " သာ. ကောင်း၏ခေါ်ရန်ရှောလုသည်" မှသည်တမင်တကာ ရည်ရွယ်. မကောင်းပါဖွင့်ပွဲအဆက်မပြတ်ပုံတူပွား - စက်တင်ဘာလ 20, 2019
SeeBoundless Blackmagic EGPU Pro ကိုအတူအမေဇုံမိုးသစ်တော 3D တိုးပွား Reality မော်ဒယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ - စက်တင်ဘာလ 20, 2019
Blackmagic ဒီဇိုင်းသစ် ATEM Mini ကိုမိတ်ဆက် - စက်တင်ဘာလ 13, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ Dalet တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Ooyala OTT SJGolden - လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality	2019-09-11
ယခင်: Show ကိုနယူးယောက်မိတ်ဆက် Podcasts စီးရီးများနှင့်သီးသန့် Podcasts Sessions NAB
နောက်တစ်ခု: Sohonet Apple ကတီဗီများအတွက် ClearView Flex ကို App ကိုစတင်ရန်ရန်